Kitra – Fitantanana ny FMF: mampisalasala ny taratasin’ny Fifa tsy nisy daty sy sonia | NewsMada
Kitra – Fitantanana ny FMF: mampisalasala ny taratasin’ny Fifa tsy nisy daty sy sonia
Niteraka resabe teo amin’ny tontolon’ny baolina kitra malagasy indray ny fisian’ny taratasy mitonona ho avy amin’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa), manambara fa Rabekoto Arizaka Raoul, ihany ny filohan’ny Federasiona malagasy (FMF).
Ofisialy sa tsy ofisialy? Izany ny fanontaniana teny am-bavan’ny mpitia baolina kitra malagasy, nanomboka ny alatsinainy lasa teo, noho ny fisian’ny taratasy milaza fa avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), nivoaka tamin’ny tambanjotra serasera. Filazana fa mbola mitazona an-dRabekoto Arizaka Raoul, ho filohan’ny federasiona. Ary manome fahefana feno ny filoha lefitra voalohany, Andrianony Victorien hisahana ny fampandehanan-draharaha rehetra eto Madagasikara. Voalazan’ilay taratasy fa mahafantatra tsara ny olan’ny federasiona malagasy ny Fifa.
Voalaza ihany koa fa tohin’ny fivoriana nampitain-davitra natao ny volana jona sy jolay tamin’ny taona 2020, mikasika ny fitantana ny federasiona malagasy ny anton’ny namoahan’ny Fifa izao fanapahan-kevitra izao. Nahagaga ny mpanara-baovao kosa ny tsy fisian’ny daty tamin’ilay taratasy sy ny olona nanao sonia izany. Teo koa ny tsy namoahan’ny federasiona malagasy ny vaovao ofisialy mikasika ity fanambaran’ny Fifa ity, na voalazan’ilay taratasy aza fa efa nandefasana fampahafantarana izany ny sekretera jeneralin’ny FMF.
Ho avy ny solontenan’ny Fifa sy ny Caf
Nilaza ny tsy nahita sady tsy mahafantatra ny fisian’izany taratasy izany ny filoha lefitry faharoa eo anivon’ny Federasiona, Andriamanampisoa Alfred, azo an-telefaonina, omaly tolakandro. Ity farany, izay nampahafantatra fa vao avy nihaona tamin’ny sekretera jeneralin’ny Fifa, i Fatma Samoura, tany Zurich, ny alatsinainy 22 novambra lasa teo. Nambarany fa naharitra 40 mn ny dinika nifanaovan’izy mianadahy ary voaresaka tamin’izany ny fitantanana ny baolina kitra malagasy. Fantatra tamin’ny resaka nifanaovana taminy koa fa efa tokony ho tamin’ny tapaky ny volana novambra iny no nisy solontenan’ny Fifa sy ny Caf, ho tonga eto Madagasikara hanao fanadihadiana mikasika ny zava-misy marina momba ny tontolon’ny baolina kitra malagasy. Noho ny fisian’ny kongresy natrehin’izy ireo, ny zoma 26 novambra lasa teo anefa dia hoe nahemotra izany. Miandry ny fiavian’ireo solontena roa avy amin’ny Caf sy roa avy amin’ny Fifa izany ny rehetra, ny amin’izay ho fanapahan-keviny.